By Reuters - 21 November 2017 - 07:19
FILE PHOTO: Zimbabwe's President Robert Mugabe looks on as his deputy Emmerson Mnangagwa reads a card during Mugabe's 93rd birthday celebrations in Harare, Zimbabwe, February 21, 2017.
Zanu-PF ‘nothing’ without Robert Mugabe‚ says youngest son
Robert Mugabe's youngest son has taken to social media to praise his father.
ZANU-PF's action follows a weekend of high drama in Harare that culminated in reports Mugabe had agreed to stand down - only for him to dash the hopes of millions of his countrymen in a bizarre and rambling national address on Sunday night.
Zanu-PF sacks Mugabe as party leader
The firing of Mugabe by Zanu-PF puts more pressure on the 93-year-old ruler to step down.
Resign as president or else we will impeach you‚ Zanu PF warns Mugabe
Mugabe has been recalled as party leader by Zanu PF‚ but remains president of the country.
Dirco declines to comment on Mugabe’s recall by Zanu PF
ZANU-PF did not want Mugabe to quit in front of military - sources